दैनिक कति पानी पिउने र कसरी पिउने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा ! « Lokpath
२०७७, १ कार्तिक शनिबार १२:४५
प्रकाशित मिति : २०७७, १ कार्तिक शनिबार १२:४५
खानासँग पानीको सेवन गर्नु हुँदैन । खानासँग पानी पिउनाले पाचनक्रिया सुस्त हुन्छ र खाना राम्रोसँग पच्दैन । खाना खानुभन्दा १/२ घण्टा अगाडि र खाएको १ घण्टा पछि मात्र पानी पिउनु पर्छ ।